Rabindranath Tagore. Makore makumi manomwe nemana asina mukurumbira wevanyanduri veIndia. | Zvazvino Zvinyorwa
Nhasi zvazadzikiswa 77 makore yekupfuura kwaRabindranath Tagore, anonyanya kuzivikanwa kudetembi dzechiIndia. Zvirokwazvo mudzimba zhinji mune shanduro yemabasa ake akasarudzwa. Mune rangu ndere rinozivikanwa kwazvo, iro re Mupepeti Aguilar (Nobel Prize Raibhurari), ine vhezheni ye Zenobia Camprubi, mudzimai wenhetembo Juan Ramón Jiménez.
Iyo yakasarudzika kwazvo edition, ine bhuruu inochinja inonamira, tsamba dzakasimudzwa uye musana wegoridhe, yakandikwezva kubva pazera diki kwazvo. Icho chaive chimwe chezvikonzero zvekutora bhuku uye kuverenga nhetembo dzaTagore kunyangwe ainzwisisa zvishoma. Nhasi ndinonunura 4 yenhetembo dzake dzerudo kuyeuka munyori uyu akakunda iyo Mubayiro weNobel muna 1913.
2.1 Akandiudza zvinyoro nyoro: «Mudiwa wangu, nditarise mumaziso ...
2.2 Zvinotaridza kwandiri, shamwari yangu, kuti risati rasvika zuva rehupenyu ...
2.3 Ndiregerere nhasi kusashivirira kwangu, mudiwa wangu ...
2.4 Ini ndinotora maoko ako, nemoyo wangu, ndichikutsvaga ...
Akazvarirwa mukati Calcuta muna 1861, pamusoro pekuve mudetembi, Tagore aivewo muzivi uye pendi. Mudiki pane vane gumi nevana hama, aive we mhuri yakapfuma uko kwaive nenzvimbo huru yekuziva. Akaenda kuEngland aine makore gumi nemanomwe kuti apedze kudzidza, asi akadzokera kuIndia asati apedza zvidzidzo zvake.
Tagore akanyora nyaya, zvinyorwa, nyaya pfupi, mabhuku ekufambisa nemitambo. Asi pasina kupokana mukurumbira wake wakauya kwaari nekuda kwekunaka kwakakosha kwenhetembo dzake, kwaakaisawo mimhanzi. Zvanga zviri mudziviriri werusununguko rwemaIndia uye muna 1913 akapihwa iyo Mubayiro weNobel muMabhuku mukucherechedza basa rake rese uyezve nezvematongerwo enyika uye zvematongerwo enyika. Uye muna 1915 akatumidzwa zita Caballero naMambo George V. Mumakore ekupedzisira ehupenyu hwake akazvipirawo kupenda.
Pakati pekugadzira kwake kwakakura kunoonekera Nziyo dzemambakwedza, akafuridzirwa nezviitiko zvakavanzika zvaakava nazvo; Sangano renyika, rondedzero yezvematongerwo enyika pachinzvimbo chake mukuda rusununguko rwenyika yake; Chipo chinorira, wevanonyanya kuzivikanwa; Mutumwa waMambo, tamba. Kana mabhuku enhetembo Murimi Webindu, Mwedzi Mutsva o Mupoteri.
Akandiudza zvinyoro nyoro: «Mudiwa wangu, nditarise mumaziso ...
Akataura zvinyoro nyoro: «Mudiwa wangu, nditarise mumaziso.
"Ndakamutsiura, ndakavava, ndikati:" Enda. " Asi hazvina kuenda.
Akauya kwandiri ndokundibata maoko… ndakamuudza kuti: "Ndisiye."
Asi hazvina kuenda.
Akaisa dama rake panzeve yangu. Ndakadhonza zvishoma
Ndakamutarisa ndokuti, "Haunyare here?"
Uye haina kufamba. Miromo yake yakakwesha dama rangu. Ndakadedera,
ndikati, "Unotaura sei?" Asi haana kunyara.
Akapinza ruva mubvudzi rangu. Ini ndikati, "Hazvina maturo!"
Asi haina kusimuka. Akabvisa korona muhuro mangu, ndokuenda.
Uye ini ndinochema uye ndinochema, uye ini ndinobvunza moyo wangu:
"Sei, sei asingadzoke?"
Zvinotaridza kwandiri, shamwari yangu, kuti risati rasvika zuva rehupenyu ...
Zvinotaridza kwandiri, mudiwa, kuti pamberi pezuva rehupenyu
iwe wanga wakamira pasi pemvura yemvura yemaroto emufaro,
uchizadza ropa rako nemvura yaro isina kugadzikana.
Kana pamwe nzira yako yaive kuburikidza nemunda wevamwari,
uye kuwanda kwekufara kwejasmine, maruva uye oleanders
akawira mumaoko ako akaita mirwi uye, achipinda mumoyo mako,
pakava nemhirizhonga ipapo.
Kuseka kwako rwiyo, ane mazwi ari kunyura
mukuridza mhere; kubvutwa kwekunhuwa kwemamwe maruva
usapfeka; Zvakafanana nechiedza chemwedzi chinopinda
kubva pahwindo remiromo yako, apo mwedzi wakahwanda
mumwoyo mako. Handichadi zvimwe zvikonzero; Ini ndinokanganwa chikonzero.
Ini ndinongoziva kuti kuseka kwako ndiko kunyongana kwehupenyu mukupanduka.
Ndiregerere nhasi kusashivirira kwangu, mudiwa wangu ...
Ndiregerere nhasi kusashivirira kwangu, mudiwa.
Ndiyo yekutanga mvura yezhizha, uye grove rerwizi
Anofara, uye iyo kadam miti, iri kutumbuka,
Vanoidza mhepo dzinopfuura nemagirazi ewaini inonhuwirira.
Tarisa uone, kune ese mativi edenga mheni
maziso avo anotanga, uye mhepo dzinomuka kuburikidza nevhudzi rako.
Ndiregerere nhasi kana ndazvipira kwauri, mudiwa wangu. Zvakadii nezvega
zuva rakavanzwa mukusanaya kwemvura; zvese
mabasa amira mumusha; mafuro ari
kusiiwa. Uye kuuya kwemvura kwawanikwa mune yako
maziso akasviba mimhanzi yake, uye Chikunguru, pasuo rako, mirira, na
jasmine kune rako bvudzi mune rake rebhuruu siketi.
Ini ndinotora maoko ako, nemoyo wangu, ndichikutsvaga ...
Ndinotora maoko ako, nemoyo wangu, ndichikutsvaga,
kuti unogara uchindinzvenga mushure memashoko nekunyarara,
inonyura murima remaziso ako.
Asi ndinoziva kuti ndinofanira kugutsikana murudo urwu,
nezvinouya mukuvhunduka uye zvinotiza, nekuti isu tawana
kwechinguva pamharadzano dzenzira.
Ndine simba here zvekuti ndinogona kukutakura kuburikidza neizvi
kuwanda kwenyika, kuburikidza neiyi labyrinth yemakwara?
Ndine here chikafu chekukutsigira nemumugwagwa une rima,
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Rabindranath Tagore. Makore makumi manomwe nemana asina mukurumbira wevanyanduri veIndia.